जानी राखौं, किन नियमित गाजर खाने ? - बैदेशिक पोष्ट
जानी राखौं, किन नियमित गाजर खाने ?
काठमाडौं : जाडोयाम सुरु भएको छ। रोगबाट प्रभावित हुने बिरामीको संख्या पनि यही मौसममा बढी हुन्छ। यतिबेला खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। समयमै दैनिकी खानपानशैलीमा ध्यान दिन सकेन भने रोगको शिकार हुन बेर लाग्दैन। त्यसैले सन्तुलित खानापान, शरीरलाई न्यानो राख्ने र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। साथसाथै नियमित शारीरिक व्यायामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
उसो त हामीले गाजरलाई सलादको रुपमा खाएकै हुन्छौं। तरपनि जाडो मौसममा यसलाई नियमित खान सक्यौं भने कतिपय रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ। गाजरमा प्राय सबै किसिमका पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छन्। त्यसैले गाजरलाई जाडोको ‘सुपरफुड’ भनिन्छ। यसमा एन्टिअक्सडेन्ट गुण हुन्छ। जसले फ्रि रेडिकलबाट बचाउँछ। गाजर आँखा, मधुमेह, मुटु र क्यान्सर बिरामीका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। यसले कब्जियतको समस्याबाट पनि मुक्ति दिन्छ।
आँखाका लागि गाजर : गाजर आँखाका लागि धेरै राम्रो मानिन्छ। यसमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ।भिटामिनले आँखाको स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। यसले मोतियाविन्दु तथा अरु आँखाजन्य रोग लाग्न बाट बचाउँछ।
क्यान्सरबाट बचाउँछ : नियमित गाजर खाँदा क्यान्सर लाग्नबाट बचाउँछ। यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरको हानिकारक फ्री रेडकल्ससँग लड्न मद्त गर्छ। क्यान्सरसँग लड्नका लागि एन्टीअक्सिडेन्टहरु धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
मुटुका लागि फाइदाजनक : गाजर मुटुका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ। यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट मुटुका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका साथसाथै गाजरमा रहेको पोटासियम ब्लड प्रेसरको कन्ट्रोल राख्नमा मद्दत गर्छ। गाजरमा पाइने फाइबरले अनावश्यक तौल बढ्न दिँदैन। अन्य मुटुसम्बन्धी रोग लाग्नबाट बचाउँछ।
प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउँछ : प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनमा गाजर धेरै फाइदाजनक छ। यसमा रहेको भिटामिन सीले एन्टीबडिज बनाउनमा मद्दत गर्छ जसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बचाउँछ। भिटामिन सी शरीरमा आइरन लिन, यसको प्रयोग गर्न र संक्रमण रोक्न मद्त गर्छ।
कब्जियतको समस्या भगाउँछ: कब्जियतको समस्या भएकाहरुलाई गाजर धेरै फाइदाजनक मानिन्छ। बेलाबेलामा कब्जियतले दु:ख दिइरहन्छ भने नियमित रुपमा काँचो गाजर खाँदा यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर, क्याल्सियम र भिटामिन के हुन्छ। यिनीहरुले हड्डी बलियो बनाउनमा मदद्त गर्छन्।
मधुमेह नियन्त्रण गर्छ : गाजरले मधुमेहलाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ। त्यसैले मधुमेहका बिरामीलाई जागरलगायत बिना माड भएका तरकारी खान सल्लाह दिइन्छ। गाजरमा रहेको फाइबरले सुगर नियन्त्रण राख्नमा मद्दत गर्छ।